Fahadisoam-barotra amin'ny mailaka 38 hijerena alohan'ny fikitihana ny Send | Martech Zone
Fahadisoana amin'ny marketing amin'ny mailaka 38 hijerena alohan'ny fikitihana ny fandefasana
Alatsinainy Martsa 16, 2020 Alatsinainy, Aogositra 23, 2021 Douglas Karr
Mbola misy hadisoana taonina hafa azonao atao amin'ny programa marketing mailaka manontolo… fa ity infographic avy amin'ny Email Monks mifantoka amin'ireo hadisoana mahatsikaiky ataontsika alohan'ny tsindrio send. Ho hitanao fa misy vitsivitsy momba ny mpiara-miasa aminay 250ok amin'ny famolavolana sy ny fahafaha-mamonjy. Andao hitsambikina avy hatrany:
Alohan'ny hanombohantsika, efa napetraka ho amin'ny tsy fahombiazana ve isika sa amin'ny fahombiazana? Ireo mpanohana anay ao amin'ny 250ok manana vahaolana tsy mampino izay afaka manampy anao hanara-maso saika ny olana rehetra momba ny lazan'ilay mailaka, ny fanaterana ary ny fametrahana boaty.
Dedicated IP - aza avela hosimban'ny mpandefa ratsy amin'ny tambajotra IP mitovy amin'ny serivisy mailakao ny fahafahanao mamonjy.
Fametrahana Inbox - Mampiasà vahaolana fanaraha-maso boaty hanamarinana ireo mailakao fa tsy aterina amina fampirimana junk fotsiny, fa manamboatra ilay boaty.
Deliverability - aza mamela serivisy mailaka tsara ho an'ny iray ratsy ary manimba ny fahafahanao mitondra.
lisitra mainty - alao antoka fa tsy ao anaty lisitra mainty mpandefa ny adiresy IP anao, raha tsy izany dia mety tsy ho afaka haterina ianao na hametrahana boaty.
Domain - mandefasa avy ary mitazona kaonty mailaka tsara hahafahanao manangana ny lazanao (miaraka amin'ny IP-nao).
SPF - Tsy maintsy atao ny fametrahana ny rafitra Framework Sender mba hahafahan'ny ISP manao Ny ISP dia afaka manamarina ary handray ny mailakao.
DKIM - Mail an'ny DomainKeys mamela fikambanana iray handray andraikitra amin'ny hafatra iray izay mandeha.
DMARC - DMARC no maodely fanamarinana farany farany hanomezana ISP ireo fitaovana ilain'izy ireo hamelana ny mailakao.
Loops amin'ny valiny - alao antoka fa nampihatra hevitra ianao mba hahafahan'ny vaovao avy amin'ny ISP hotaterina any amin'ny ESP anao ho fanatsarana ny fandefasana mailaka.
Ny fitantanana ny mpanjifa dia singa iray tena ilaina amin'ny programa marketing mailaka mahasalama.
Fanomezan-dàlana - aza mahazo olana amin'ny ISP. Mangataha alalana handefa mailaka.
safidinao - omeo sy apetraho matetika ny zavatra antenainao ho an'ny mpanjifanao.
Tsy miasa - esory ny mpamandrika tsy miasa mba hampihenana ny fitarainana tsy misy famandrihana sy ny tsy fisian'ny fandraisana andraikitra.
Frequency - aza asiana avo loatra ny refesina fa lasa ny mpamandrika.
Segmentation - efa nanisa fanisana indroa sy fahitsiana ve ianao tamin'ny fizaranao?
Eto no misy ny vola fa orinasa maro no manao hadisoana atiny mampidi-doza.
Andalana lohahevitra mankaleo - raha mila olona manokatra ianao dia omeo antony izy ireo! Zahao hoe Generator ny laharam-pizarana ActiveCampaign Ho fanampiana.
Proofing - novainao ve ny lahatsoratra momba ny fitsipi-pitenenana sy ny tsipelina? Ahoana ny feon'ny feo?
CTA mahery - ataovy miavaka amin'ny finday na amin'ny biraonao ny antso-to-Action anao!
FNAME - raha tsy manana anarana ho an'ny mpisoratra anarana rehetra ianao dia aza adiresy! Na mampiasa lojika.
Mitambatra saha - andramo ny angon-drakitrao rehetra alohan'ny handefasana an-tsarintany an-tsarintany sy atiny mavitrika.
fiaviana - fitsapana ny fiaviany manerana ny mpanjifa mailaka… maro no tsy mampiasa azy.
Buttons - ampiasao ny sary ho toy ny bokotra mba hahitanao ny bokotrao amin'ny mpanjifa mailaka rehetra.
Internationalization - mampiasa ny lamina sy ny tandindona mety amin'ny mpizarazara ve ianao?
Typography - ampiasao ny endritsoratra miaraka amina back-back ho an'ny fitaovana sy mpanjifa izay tsy manohana azy ireo.
Social - manana rohy mankany amin'ny kaontinao media sosialy ve ianao mba hahafahan'ny olona namana sy manaraka azy?
Ireo mpanohana anay ao amin'ny 250ok manana safidy aloha hijerena ny mailakao amin'ny mpanjifa mailaka lehibe rehetra.
Fizaha Snippet - andramo ny mailaka hahitanao ny andalana vitsivitsy voalohany anao amin'ny topi-maso amin'ny mailaka izay mandresy lahatra
Alt - Mampiasà lahatsoratra fanoloana maharesy lahatra amin'ny sary rehetra.
fitsapana - andalana ny lohahevitra, rohy, CTA, personalizaiton, fanamarinana ary fiovana isan-karazany.
Unsubsubses - endri-tsoratra kely sy tsy fisoratana anarana manjavozavo no mahatonga ahy tsy hanao raharaham-barotra miaraka aminao.
Accordions - ampidiro ny fifanarahana ho an'ny mailaka lava misy fizarana mba hijerena finday tsara.
temimaso - ampiasao sary avo lenta nohamafisina ho an'ny fampisehoana retina ampiasain'ny fitaovana Apple maoderina.
manaiky - alao antoka fa toa tsara amin'ny mailaka sy finday tablette ny mailakao. Azonao atao ny manampy ny akanjo azo ampiasaina, tsy ho ela!
Mandefa fanamarinana amin'ny mailaka
Ny mekanikan'ny mailaka sy ny fomba fiasan'izy io rehefa tonga eo amin'ny boaty fisoratana anarana ny mpamaky anao dia mety hisy fiatraikany amin'ny fahatokisanao azy ary koa ny taha-tsindry ary ny tahan'ny fanovana.
Avy amin'ny Adiresy - ampiasao ny 'From Address' azo fantarina
Mamaly amin'ny adiresy - maninona no ampiasaina ny noreply @ raha misy ny fotoana ahafahana mifandray sy mivarotra?
Trigger Lojika - alao antoka fa novonoina ho lojika ny fampielezana drip anao.
Links - notsapainao daholo ve ny rohy rehetra tamin'ny mailaka alohan'ny andefasana ny mpividy rehetra?
fiantsonana Pages - manangana pejy fitobiana avo lenta miaraka amina saha vitsivitsy.
tatitra - sambory ny statistika, diniho izy ireo, ary hatsarao ny ezaka marketing amin'ny mailakao.
fanarahan-dalàna - manana ny fampahalalana ilaina rehetra momba ny fanarahan-dalàna tanteraka ve ianao amin'ny tongotrao?
[box type = ”download” align = ”aligncenter” class = ”” width = ”90%”] Sintomy ny tsikera mailaky ny Monks Email lisitra ny entana hijerena alohan'ny andefasanao. PDF kely tsara be! [/ Boaty]
Tags: dkimDMARCMail an'ny DomainKeysfifanarahana mailakamailaka fiavianabokotra mailakamailaka CTAsfonosana mailakamailaka matetikainternationalization mailakany sahan'ny fampifangaroana mailakaalalana amin'ny mailakamailaka retinatsipika momba ny mailakamailaka fanoloana mailakafitsapana mailakatypografia mailakamandika ny mailakaFNAMEImagempamandrika tsy miasaalalanamanaikytemimasospfCTA maheryfahazoan-dàlana ho an'ny mpanjifasafidin'ny mpanjifatady fanoloana
Fa maninona ny raharaham-barotra eCommerce rehetra no mila fitaovana fanaovana vidiny mavitrika?
Mar 10, 2016 amin'ny 5: 26 AM
Ekeo tanteraka amin'ireo fahadisoana ara-barotra mailaka ireo.
Tsapako ihany koa fa ireo no fahadisoana mahazatra indrindra ataon'ny ankamaroan'ny mpivarotra mailaka. Ny fandefasana mailaka misy lohahevitra mankaleo dia fahadisoana mahazatra.
Tsy manokatra mailaka tsy mahasarika ny masoko mihitsy aho. Tsy miraharaha na mamafa mailaka toy izany avy hatrany aho.
Ny mpivarotra mailaka dia tokony hahatakatra fa tsy misy olona te handany ny fotoanany amin'ny famakiana mailaka mankaleo. Raha tena te hanova azy ireo ianao dia tsy maintsy mandefa mailaka miaraka amin'ny andalana lohahevitra manintona, manintona ary mampanantena. Satria io ihany no andalana vakian'ny mpamaky voalohany.
Noho izany, ny fikarakarana azy dia afaka manatsara ny fahaizanao.
Faly aho fa notanisainao teto ny fahadisoana lehibe rehetra momba ny varotra mailaka mba ahafahantsika mianatra azy ireo ary afaka misoroka azy ireo. Misaotra nizara izany taminay. 😀